Maitiro Ekumupa Iye Space: 8 Zvinhu Zvekuita + 6 Zvinhu ZVISINA KUITA - Ukama
Maitiro Ekumupa Iye Space: 8 Zvinhu Zvekuita + 6 Zvinhu ZVISINA KUITA
Kana zvasvika kune hukama, isu tese takasiyana zvakanyanya.
Vamwe vedu vanoda kushandisa nguva yedu yese iripo neuyo watinoda…
… Uye vamwe vedu tinoshuva nzvimbo.
Izvi hazvireve kuti tinoda vatinodanana navo zvishoma kana kuti hukama hwacho husina kugadzikana inongova chikamu che zvatiri isu.
Icho chinhu isu tese chatinofanira kubvuma pamusoro pedu, uye nezve vanhu vatinoda.
Kazhinji, mumwe munhu anoda yavo nzvimbo anozopedzisira ave muhukama nemunhu asingadaro.
Hukama hwakaita seizvi hunogona kubudirira, chero bedzi vaviri vacho vari kuda kurerutsa nekugadzirisa zvavanotarisira uye maitiro kuti vaone kuti mumwe munhu anonzwa kudiwa asi kwete claustrophobic.
Inoda nzvimbo muhukama haisi hunhu-hwakanangana nehunhu. Kune vese vakadzi nevarume kunze uko vanoona vachida chakakosha nzvimbo yekufema kana vari muhukama.
Padivi rerutivi, pane vese varume nevakadzi vanotambura kuti vanzwisise pfungwa yekupa nzvimbo. Ivo havagone kufungidzira vachida chero nzvimbo kubva kune mumwe wavo.
Vanogona kunge vaive muhukama hwepamberi nemumwe waasina kunzwa kudiwa kwekuve nenguva yakawanda vakaparadzana zvachose, uye saka vanoona zvakaoma kugadzirisa kune simba idzva ravasati vamboona.
Kutaurirana chikamu chekutanga che hukama hwakazvipira , apo kukwirira uye kudzikira uye mafaro emwedzi mishoma yekutanga atanga kugadzikana kuita chimwe chinhu chakachengeteka zvakanyanya, zvinogona kuve zvinonyengera.
Mese muri kunzwanana uye kuyedza kufunga kuti chii chinoita kuti mumwe munhu abate, uye zvavanonzwa vakasununguka nazvo.
Kugadzira kuti ingani nzvimbo yaunoda mese uye izvo zvamuri vaviri kuda kuchinjana pazviri chikamu chakakosha chechikamu chino.
Chinyorwa ichi chakanyanya kunyorwa chiine vakadzi mupfungwa. Zviri zvevakadzi chero vari kunze uko vakazviwana vari muhukama hwakazvipira nemurume, uye vakaona kuti, kuitira kuti hukama hwacho hubudirire, vari kuzofanirwa kuvapa yakawanda nzvimbo yekufema.
Asi, iwo mazano pano anogona kushandiswa kune vese varume nevakadzi, zvisinei nezve kwavo kuita zvepabonde.
Ndinovimba, ivo vachabatsira kana aya ari mamiriro awakazviwana iwe uri, zvisinei kuti ndiani waunoda.
Aya mapoinzi pazasi anofanira kukubatsira iwe kufunga kuti ungapa sei murume wako iyo nzvimbo yaanoda, nepo usingakanganise iwe pachako mufaro mukuita.
apo iwe unonzwa kunge iwe usiri wekune imwe nzvimbo
Zvinhu zvisere zvekuita kana uchipa murume nzvimbo
1. Revel uri munzvimbo yako wega.
Zvizhinji sezvazvinogona kunge zvisingaite senge iwe paunenge uchida kushandisa YAKO nguva yako nemunhu waunoda, kutora nguva wakaparadzana kubva kune mumwe kunogona kuve yakanakisa nhau kune iwe futi.
Nechemumoyo, haufunge here kuti zvingave zvakanaka kupedza nguva shoma uri wega nguva nenguva?
Iwe haufunge here kuti ingave iri zano rakanaka kuisa imwe simba muzvido izvo zvako zvako?
Haufunge izvozvo, se murudo sezvo iwe ungave uinavo, ungangorwara zvishoma navo pakupedzisira kana iwe usina imwe nguva yekuparadzana?
Saka, tarisa pane izvo.
Tarisa pane zvese zvikonzero nei nzvimbo yakanakira iwe, uyezve nezvavo.
Uye nakidzwa nenzvimbo iyoyo. Ita zvakanyanyisa zvacho. Spoil yourself. Zvibate.
Ita zvinhu zvese zvausingawanzo kuita kana uchinge uchipedza nguva muri pamwe chete, nekuti haanyatsovada, kana ivo vasiri chaizvo zviitiko zvevanhu vaviri.
Enda unogeza. Tarisa iwo akateedzana aasingade. Bika chikafu chako chaunofarira.
Revel uri wega, kana munguva yaunopedza uine vamwe vanhu.
kusaina waunoshanda naye ane rudo newe
Zvino, paunodzoka pamwe chete, unenge uine zvakawanda zvinhu zvinonakidza zvekutaura nezvazvo .
2. Kukudziridza humwe hukama hwako.
Mose muri vaviri munofanirwa kuona kuti hamusi kuregeredza vamwe vanhu vakakosha muhupenyu hwenyu muchitsigira mumwe wako.
Saka, kana iwe uchifunga kuti murume wako anoda imwe nzvimbo, tanga kuronga pamwe nevamwe vanhu vaunoda.
Shanyira mhuri yako. Enda pakupera kwevhiki neshamwari yako yepamwoyo. Usapedze nguva wakaparadzaniswa nekuda kwayo chete, asi nakidzwa nazvo.
3. Ita nguva yaunopedza pamwechete nguva yemhando.
Kana mose muri kushandisa nguva yamunoshandisa kure nemumwe, munogona kushandisa nguva yamunoshandisa pamwe chete.
Itai zvirongwa pamwe chete. Endai pamazuva. Ronga zviitiko. Edza zvimwe zvekuvaraidza zvevakaroorana . Tarisa zvakakwana kune mumwe nemumwe, uye uvepo.
Kana nguva yamunopedza muri pamwe inguva yemhando yepamusoro, hauzogumbuke kana usiri pamwe chete.
4. Ridza pasi pasi rako rekubata.
Kana vaviri venyu imi muchiwanzo kuve mune yekugara meseji kusangana mukati mezuva, funga kuisazve iyo mukati.
Kana iwe uchingogara uchitaurirana, saka hapana kana mumwe wenyu ane mukana wekutarisa pane izvo zvamunenge mave kuenda.
Kunyangwe kutaurirana kwedhijitari kunogona kuita kuti unzwe sekunge iwe hauna kunyatso kuve nenguva kubva kune mumwe nemumwe.
Zvinyorwa zvinogona zvakare kuve zvinonyengera nekuti zviri nyore kuzvidudzira zvisizvo. Saka kana zviri pachena kuti vanoda nzvimbo, edza kuchengeta mameseji kusvika kune hutano, uye nekuita hurukuro dzakakosha pamusoro pezvinhu paunenge uchinyatsozviona.
5. Ita sarudzo dzako pachako.
Paunenge uri muhukama hwakakomba, zviri nyore kutanga kuvimba nemumwe wako kuti akubatsire kuita sarudzo dzako dzese, hombe kana diki.
Kuita wega sarudzo kunogona kukubatsira kuti unzwe zvishoma kutsamira pavari , uye vavimbise kuti hausi kunyanya kuvimba navo.
6. Ita kuti musangano wako unotevera ufare.
Achiri kuda imwe nzvimbo, zvakanaka kuti usamupe isingazivikanwe nguva kubva kwauri.
Unofanira kurisiya kwenguva yakareba sei? Ndicho chinhu chamunogona kukurukura pamwe chete.
Anogona kunzwa sekunge anoda vhiki rekuzorora kuti agare akatenderedza dzimba dzeumwe neumwe pahusiku hwebasa, saka pamwe iwe unopa zano revhiki rinotevera.
Kana kuti pamwe anoda vhiki yega kwaari, mune iyo mamiriro iwe aunogona kuronga zuva rehusiku kwevhiki inotevera.
Chero zvaunoita, tora mhando yekuzvipira kwakasimba kubva kwaari maererano nekuti muchaonana riinhi.
Zviri nani zvikuru kuti ugadziriswe izvozvi pane paunenge uri wakaparadzana uye kutaurirana chiso nechiso hazviite.
7. Kurudzira zvaanozvivaraidza nazvo.
Dzimwe nguva nzvimbo inogona kuve yakangofanana nekukurudzira murume wako kutevedzera zvido zvake uye zvishuwo zvaaive nazvo imi vaviri musati masangana.
Hukama hunozongochinja hunhu hwemunhu, uye izvi zvinogona kumboreva kuve nemikana mishoma yekuzviratidza nekuita zvinhu zvaanofarira kuita.
Nekumuudza kuti adzokere muzvinhu zvaunoziva kuti anofarira, hausi kungomupa nzvimbo, urikumuyeuchidza kuti hukama hwako uye iye kuva nehupenyu hwake hazvibvumirane.
Uchamuratidzawo zvauri shamwari huru yauri. Iye anozokuda iwe zvakanyanya kunyanya kuti unzwisise kuti zvimwe zvinhu zvinoreva zvakawanda kwaari.
8. Taura naye nezvazvo.
Teerera, iwe une mvumo yekuedza kunzwisisa kuti sei achifunga kuti anoda imwe nzvimbo nguva nenguva.
Saka zvinogamuchirwa zvakakwana kumubvunza nezvazvo. Asi zvakakosha kuti uzviite nenzira kwayo.
Gara naye pasi uye utaure chimwe chinhu chisiri-chinopisa senge, 'Rega ndipinde mukati memusoro wako wakanaka. 'Ndiri pasi chose newe kuva nenguva uye nzvimbo yako wega, asi ndinoda kunzwisisa zvauri kufunga nekunzwa izvozvi.'
murume anondibata semwana mudiki
Izvi zvirevo hazvigone kumuita kuti azvidzivirire. Zvinongotaridza kuti iwe unoda kumuziva zvirinani - chinova chinhu chakanaka kana hukama hwacho huchiita mukufamba kwenguva.
Usataure chinhu chakadai, 'Sei uri kuita seizvi? Icho chinhu chandakaita here? Hauchandida here? '
Uyu mutsara wekubvunza kuda ita kuti azvidzivirire. Anogona kufunga kuti unoshaiwa uye hauna kuchengetedzeka uye zvinogona kumuita kuti abvunze kana achizokwanisa kuwana nzvimbo yaanofarira nguva dzose pasina kusangana neSpanish Inquisition nguva dzese.
6 Zvinhu Zvisingaite Kana Uchipa Murume Nzvimbo
1. Vachivenga nekuda kwayo.
Izvo zvekuti murume wako anoda space kubva kwauri hazvireve kuti havakude.
Icho chinhu chaunongoda kugamuchira, uye iwe unofanirwa kukurumidza kudzima chero chigumbu chinotyisidzira kusimudza musoro wayo. Zvinongoita kuti mese musafare.
2. Cherekedza pamusoro payo.
Izvi zviri nyore kutaura pane kuzviita, asi hapana zvachose chikonzero chekuti iwe ushandise nguva yako wakaparadzana uchinetseka nezvekuti anoda nguva asipo kwauri.
Zadza mazuva ako nezvimwe zvinhu uye nevamwe vanhu. Simbisa pfungwa dzako. Usafungisisa nezve izvo zvaari kuita - tarisa pane izvo zvauri kuita.
3. Tora pachako.
Zvakawanda sekunzwa kwazvinoita sedzimwe nguva, izvi hazviratidzi pauri semunhu.
Mumwe wako haadi nzvimbo kubva kwauri nekuti iwe pane chawakatadza uye havasi kuedza kukuvadza iwe.
Ivo vanongova iwo mhando yemunhu anoda kumbosurukirwa kana imwe nguva neshamwari dzavo kuti vadzikise pasi uye kuwedzeredza.
4. Chinja maitiro ako zvakanyanya usiku hwese.
Kana iwe wafunga kuti iwe unofanirwa kuita kuedza kwekuziva kupa murume wako nzvimbo yakawanda kubva pano zvichienda kunze, unofanira kutanga kutora matanho madiki ekutendera izvo kuti zviitike.
Iwe haufanire kungoerekana wachinja nzira yako yekuzvibata kwavari zvizere, kana zvakanyanya kuderedza nguva yaunoshandisa navo.
Kutanga zvishoma nezvishoma, kubvumira kuti mose mujairire uye kutanga kunakidzwa nenguva musiyane, kuti mugone kunakidzwa nenguva pamwe chete zvakanyanya.
5. Regedza kuratidza kufarira hupenyu hwake.
Space inyaya yenyaya yekuyera, uye zvinogona kuve zvinonyengera kuti uzviite nenzira kwayo, pakutanga.
Kana iwe wafunga kuti anoda nzvimbo, iwe unogona kufunga kuti iwe unofanirwa kurega kuenda pamwe nezviitiko neshamwari dzake uye nemhuri, kuti agone kunakidzwa nenguva yakanaka ari ega navo.
Asi, apo ndine chokwadi chekuti anganakirwe nenguva yakanaka ari ega navo nguva nenguva, kana ukangozvibvisa zvachose kubva kumagariro ake uye hupenyu hwemhuri ipapo angangotanga kunzwa sechinhu chisina kunaka.
Mushure mezvose, dai yaive imwe nzira yakatenderedza, iwe ungangonzwa unonzwa kugumbuka kana akangoerekana amira kuratidza kufarira shamwari dzako kana mhuri.
6.Kumubvunza nezvezvaanga achiita.
Paunoona mukomana wako zvakare, zvakanaka kubvunza kuti anga achiitei.
Iwe unogona kunge uchitoziva zvimwe zvirevo kana iwe wakambove neapo neapo mameseji kutaurirana, asi kuwana zvishoma zvishoma info zvakajairika zvakakwana
Izvo zvisina kunaka kumubvunza nezve zvese zvidiki diki zvaakaita… kwaakaenda, waakaona, chaakadya, nguva yaakasvika kumba husiku, zvaakaona paTV.
Rangarira, iyi yaive nguva yake. Kana akanzwa kuti aida nzvimbo, pamwe haadi kuzobva aputirwa nemibvunzo nezvazvo.
Kugovana kutarisira, asi havazi vese vanonzwa kugadzikana kuisa hupenyu hwavo hwese patafura kuti mumwe wavo atore nekamu yakanaka-ine mazino.
Iva anofunga, anoremekedza uye ane mutsa, zvese kune mumwe wako uye kwauri pachako, uye ita shuwa kuti haukanganwe kuisa pamberi chako chaunoda, nguva nenguva.
Iwe uchakurumidza kumisikidza muyero wakaringana pakati pehunhu nguva pamwe chete nehunhu nguva yakaparadzana, uye hukama hwako hunoenda kubva pasimba kusvika pasimba.
Kunyange zvakadaro hauna chokwadi chekupa mukomana wako kana murume nzvimbo? Taura zvepamhepo kune hukama hukama kubva kuRelationship Gamba uyo anogona kukubatsira kuti uone zvinhu. Simply.
Sei Varume Vachiendesa Kure Uye Vasiya?
8 FAQs Kana Mukomana Ati Anoda Space
Ungaita Sei Kuti uve Musikana Musikana Akanaka: Mazano gumi Ekuchengetedza Mukomana Wako Kufara
Maitiro Ekurega Kuva Kudzora Muhukama
handina kana chekuda
kana hukama huchifanira kunge hwakavanzika
sei kuziva kuti ndiwe ani
zvinhu zvekushamisa musikana wako nazvo
kutamba nesimba kuti uwane murume
zvinhu zvekuita wega pagore idzva eve